Dhammaantoodna Waa Eeyo Ku Saabsan, January 2022
Pomsky: Wax walboo aad ka ogaan laheyd Eygan $ 5,000
Pomsky waa xirmo qurux badan oo qarsoodi iyo xumaan ah; loo ekaysiiyay eey yar oo qalafsan oo qalafsan. Iskutallaab u dhexeeya Pomeranian iyo Husky, tan cajiibka ah c
Magac bixinta eey gabi ahaanba waa muhiim. Dhamaanteen waxaan dooneynaa inaan soo koobno ​​nuxurka eeyga. Halkan waxaan ku haynaa dhammaan magacyada ugu caansan uguna fiican ee loo yaqaan 'Labrador'.
Morkie Dogs 101: Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Morkie-ka miisaankiisu aad buu u kacsan yahay waana u kalsoon yahay sida Yorkie laakiin sidoo kale wuxuu u macaan yahay sida Maltese. Soo ogow sababta isugeyntaani ay u tahay xayawaan gurijoog ah oo aad u fiican.
Chihuahua oo ah timo dhaadheer ayaa ah ey ey qadiim ah oo leh qalbi weyn isla markaana si daran daacad ugu ah dadka iyo ilaaliyayaasha xirmadooda. Iyagu waa kuwa ugu yar
Maxay Labrador Retrievers u yihiin eyda ugu caansan?
Miyuu kugu habboon yahay sheybaarku? Soo ogow waxa jira oo dhan si aad uga ogaato xayawaanka guryaha caanka ah ee tilmaamahan. Hel dhammaan faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka this saaxiibtinimo iyo xiise badan.
Eyga Shaqada Badan ee Qoyska: Baro Adhijirka Ingiriisiga ah
Adhijirka Ingiriisiga ah waa nooc caan ah oo caan ku ah sirdoonkiisa, daacadnimadiisa, iyo dabeecadda hawl karnimada. Sifooyinkaasi waxay ka dhigayaan xayawaan weyn oo qoys, sidoo kale!
Barashada Isku-dhafka Corgi Husky (aka Horgi)
Isku darka Corgi Husky waa eey ciyaar leh, oo la jeclaan karo taas oo ah xayawaanka ugu habboon qoysaska badankood. Baro xaqiiqooyin dheeri ah oo ku saabsan isweydaarsigan yar ee firfircoon.
Cardigan Welsh Corgi ma wehelkaaga saxda ah?
Cardigan Welsh Corgis, mid ka mid ah laba nooc eeyaha eyda ah ee loo yaqaan 'Corbbred Corgi', ayaa aad looga jecel yahay adduunka oo dhan. Soo ogow dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga.
Macluumaadka Taranka 101: Eeyo noocee ah ayaa Chipoo ah?
Waxaa laga yaabaa inaad horay u maqashay ama aad u aragtay isweydaarsigan hore, laakiin haddii aad rabto Chipoo (Chihuahua Poodle mix), halkan waa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan mid helin.
14 Goobaha Eyga Ayaa Ka Hadlaya: Waxa Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato INTA AADAN EY KORIN
Magacyada Poodle: 450+ Magacyo Wanaagsan, Caan ah oo Fiican Poodles
Isku-darka 'Corgi Beagle Mix': Maxaa dhacaya markii waxyaabaha soo horjeedka ah ay soo jiitaan
Cidhib buluug ah oo isku dhafan shaybaar
timaha dheer ee madow iyo bunni chihuahua
xuduud collie Australian Shepherd isku dhafka tababarka
pitbull qasan eeyaha adhijirka jarmalka